I-Protafan analogues > Insulin
Ukwakheka nokufana kwe- "Protafan", imiyalo esetshenziswayo, ukubuyekezwa mayelana nomuthi, ngentengo yawo
Leli khasi linikezela ngohlu lwazo zonke izihlokwana ze-Protafan ekwakhiweni nasekubonisweni kokusetshenziswa. Uhlu lwe-analogues eshibhile, futhi ungaqhathanisa izintengo emakhemisi.
I-analogue eshibhile yeProtafan:Humulin nph
I-analogue ethandwa kakhulu yeProtafan:Biosulin N
Ukuhlukaniswa kwe-ATX: I-Insulin (yomuntu)
1 Humulin nph insulin yomuntu
I-analogue ekwakhiweni nasenkombeni 166 rub 205 UAH
2 Biosulin N Ukuqanjwa kanye ne-analogue ekhombisa 200 rub --
3 I-Protafan NM insulin yomuntu
I-analogue ekwakhiweni nasenkombeni 356 rub I-116 UAH
4 I-Rinsulin NPH insulin yomuntu
I-analogue ekwakhiweni nasenkombeni 372 rub --
5 I-Protafan NM Penfill insulin yomuntu
I-analogue ekwakhiweni nasenkombeni 857 rub 590 UAH
Lapho kubalwa izindleko eshibhile inani eliphansi elitholakale kuhlu lwamanani olunikezwe ngamakhemisi lanqunyelwa
1 Biosulin N Ukuqanjwa kanye ne-analogue ekhombisa 200 rub --
2 Humulin nph insulin yomuntu
3 I-Rinsulin NPH insulin yomuntu
4 I-Protafan NM insulin yomuntu
5 I-Insuman Bazal insulin yomuntu
I-analogue ekwakhiweni nasenkombeni 1170 rub I-100 UAH
Kunikezwe uhlu lwezikhalazo zezidakamizwa kususelwa kwizibalo zemithi ecelwe kakhulu
Analogs ekwakhiweni nasenkombeni yokuthi isetshenziswe
Biosulin N 200 rub --
I-Insuman basal insulin yomuntu 1170 rub I-100 UAH
I-humodar b100r insulin yomuntu -- --
I-humulin nph insulin yabantu 166 rub 205 UAH
I-Gensulin N insulin yomuntu -- 123 UAH
I-Insugen-N (NPH) i-insulin yomuntu -- --
I-Protafan NM insulin yomuntu 356 rub I-116 UAH
I-Protafan NM uPenfill insulin umuntu 857 rub 590 UAH
I-Rinsulin NPH insulin 372 rub --
IPulasulin N NP insulin yomuntu -- 88 UAH
I-Insulin Stabil Human Recombinant Insulin -- I-692 UAH
Uhlu olungenhla lwe-analogues yezidakamizwa, ekhombisa Izikhundla zeProtafan, ilungele kakhulu ngoba inokwakheka okufanayo kwezinto ezisebenzayo futhi ihlangana ngokuhambisana nenkomba yokusebenzisa
Ukwakheka okuhlukile, kungahle kuhambisane ekukhombiseni nasendleleni yokusebenzisa
Insulin 178 rub 133 UAH
I-Actrapid 35 rub 115 UAH
I-Actrapid nm 35 rub 115 UAH
I-Actrapid nm penfill 469 rub 115 UAH
Biosulin P 175 rub --
I-Insuman Rapid Insulin Yabantu I-1082 rub I-100 UAH
I-humodar p100r insulin yomuntu -- --
I-Humulin ejwayelekile i-insulin 28 rub 1133 UAH
I-Farmasulin -- 79 UAH
I-Gensulin P insulin -- I-104 UAH
I-Insugen-R (Njalo) i-insulin yabantu -- --
I-Rinsulin P insulin 449 rub --
I-Farmasulin N insulin yomuntu -- 88 UAH
I-Insulin Asset insulin yomuntu -- 593 UAH
I-Monodar insulin (ingulube) -- I-80 UAH
I-Humalog insulin lispro I-57 rub 221 UAH
ILispro insulin iphinda ibambe iLispro -- --
I-NovoRapid Flexpen Pen Insulin Aspart 28 rub 249 UAH
I-NovoRapid Penfill insulin aspart 1601 rub 1643 UAH
I-Epidera Insulin Glulisin -- 146 UAH
I-Apidra SoloStar Glulisin 447 rub 2250 UAH
I-Humodar k25 100r insulin yomuntu -- --
I-Gensulin M30 insulin yomuntu -- 123 UAH
I-Insugen-30/70 (Bifazik) insulin yabantu -- --
Insuman Comb insulin womuntu -- 119 UAH
I-Mikstard insulin yabantu -- I-116 UAH
Mixtard Penfill Insulin Womuntu -- --
I-Farmasulin N 30/70 i-insulin -- 101 UAH
I-Humulin M3 insulin yomuntu 212 rub --
I-Humalog Mix insulin lispro I-57 rub 221 UAH
I-Novomax Flekspen insulin aspart -- --
I-Ryzodeg Flextach insulin aspart, i-insuludec ye-insulin 6 699 rub 2 UAH
I-Lantus insulin glargine 45 rub 250 UAH
ILantus SoloStar insulin glargine 45 rub 250 UAH
I-Tujeo SoloStar insulin glargine 30 rub --
I-Levemir Penfill insulin detemir 167 rub --
I-Levemir Flexpen Pen Insulin Detemir I-537 rub 335 UAH
I-Tresiba Flextach Insulin Degludec I-5100 rub 2 UAH
Ungayithola kanjani i-analogue eshibhile yomuthi obizayo?
Ukuthola i-analogue engabizi emthini, i-generic noma isichazamazwi, okokuqala sincoma ukuthi unake ukwakheka, okungukuthi kwizinto ezifanayo ezisebenzayo nezinkomba zokusebenzisa. Izithako ezifanayo ezisebenzayo zomuthi zizokhombisa ukuthi umuthi uyafana nomuthi, umuthi ulingana neminye umuthi noma umuthi. Noma kunjalo, ungakhohlwa ngezingxenye ezingasebenzi zezidakamizwa ezifanayo, ezingathinta ukuphepha kanye nokusebenza kahle. Ungakhohlwa ngemiyalo odokotela, ukuzelapha kungalimaza impilo yakho, ngakho-ke ngaso sonke isikhathi xhumana nodokotela wakho ngaphambi kokusebenzisa noma yimuphi umuthi.
Kumasayithi angezansi ungathola amanani entengo yeProtafan bese uthola ukuthi kutholakala ekhemisi eliseduze
Intengo yeProtafan eRussia
Intengo ye-Protafan e-Ukraine
Intengo yeProtafan eKazakhstan
Yonke imininingwane yethulwa ngezinjongo zokwaziswa futhi ayisona isizathu sokuzichaza noma ukufaka omunye umuthi esikhundleni sawo.
I-Protafan insulin iyatholakala ngesimo sokumiswa kokuphathwa kwe-subcutaneous. Ama-Ampoules aseProtafana NM Penfill ahlanganiswe kuma-cartridge ama-3 ml. Kukhona izingcezu ezi-5 kwiphakeji ngayinye. Ukuze isetshenziswe, ipeni lesirinji elisebenzisekayo leProtafan lithengwa ngokwahlukile.
Ukumiswa kumhlophe. Uma kunjalo, iqala ukuhlukaniswa ibe izingqimba, yakha i-white precipitate kanye no-ketshezi olungenamibala ngaphezulu kwawo. Ngokuphazamiseka, okuphambili kuyanyamalala.
I- "Protafan" iyi-analogue ye-insulin yabantu enesikhathi sesikhathi sesenzo. Ikhiqizwa yi-recombinant DNA isebenzisa uhlobo olukhethekile. Amazinga we-glucose ancipha ngenxa yokwanda kokufakwa kwe-intracellular ngemuva kokubopha ama-insulin kanye nama-insulin receptors kuma-adipose nasemisipha izicubu. Ngasikhathi sinye, kukhona ukwehla kwezinga lokukhiqizwa koshukela esibindini.
Umphumela omkhulu we-pharmacological utholakala ngemuva kwamahora amane kuya kwayi-12 ngemuva kokuphatha, umphumela uphikelela cishe usuku.
Le ncazelo ikhombisa ukuthi ukususwa kwe-insulin ephuma egazini kuyimizuzu nje embalwa. Umphumela wesikhathi eside somuthi uhlobene nezinga lokufakwa. Kuya ngezinto ezinjalo:
ubukhulu bamafutha angaphansi,
uhlobo lwesifo sikashukela.
Ngesikhathi sokufunda ngomuthi wobuthi kanye nokunye ukulimaza umzimba, izingozi ezithile azikasungulwa.
Isibonakaliso esiyinhloko ushukela kubantu, okuholela kwisidingo sokwelashwa kwe-insulin, kungakhathalekile iminyaka yobudala. Ngohlobo lwe-1 lesi sifo - ukwelashwa kwenziwa kusukela ekuqaleni kokuphazamiseka kwe-carbohydrate metabolism, ngohlobo lwe-2 - lapho imithi ekhethekile yomlomo inganikanga umphumela olindelekile futhi i-glycated hemoglobin ingaphezu kwe-9%. Futhi, iProtafan imiselwe isifo sikashukela sokukhulelwa kwabesifazane abakhulelwe.
I-Protafan ayivunyelwe emacaleni alandelayo:
umlando we-edema kaQuincke, eyavela njengokuphendula kwe-insulin enikezwe,
Imiphumela emibi yeProtafan ifaka lezi zimo ezilandelayo:
umuzwa wokushaya kwenhliziyo yakho,
Lokhu kuwuphawu lwe-hypoglycemia, ukuthuthukiswa okunzulu nokungabikho kwezinyathelo eziphuthumayo zokulungiswa kukhuthaza ukugcwala kwe-hypoglycemic.
Izimpawu zokungezwani komuthi zifaka:
Ukuphendula kwendawo komjovo kungenzeka - ukuluma nokudumba. Uma ujova isikhathi eside endaweni efanayo, kuvela izindebe zomlomo.
Umthamo kanye ne-overdose
Umuthi usetshenziselwa ukuphatha kuphela ngaphansi kwesikhumba. Umthamo unqunywa udokotela oholayo ngamunye, kucatshangelwa izinga le-glucose esegazini.
Umthamo ojwayelekile usukela ku-0,5 uye ku-1 IU / kg wesisindo sesineke.
Ngama-pathologies afanayo, ikakhulukazi wesifo esithathelwanayo kanye nomkhuhlane, kuyadingeka ukufaka umjovo umuthi emthanjeni owandayo.
Ukulungiswa komdosi kuyadingeka ukuze kulimale isibindi, izinso, izindlala ze-adrenal, i-thyroid gland noma i-pituitary gland.
Umthamo uguqulwa ngenxa yokusebenza komzimba noma ngenxa yokushintsha kokudla, lapho kudluliswa kusuka kulungiselelo lwe-insulin uye kolunye.
I-Hypoglycemia ngenxa yokweqisa komuthi ingathuthuka kancane kancane. Lokhu kwenzeka lapho umthamo uhlala wedlula njalo kwizidingo ezisungulwe ngudokotela.
Kungenzeka ukumisa izinhlobo ezithambile ze-overdose ngokwakho ngokunatha ushukela noma ukudla okune-carbohydrate elula ekwakhiweni. Ngenxa yengozi engapheli ye-hypoglycemia, iziguli ezinesifo sikashukela kufanele ngaso sonke isikhathi zibe nezingcezu ezimbalwa zoshukela noma uswidi.
Ekweqisweni okwedlulele nasekulahlekelweni kwemizwa, kusetshenziswa i-0.5-1 mg ye-glucagon. Ukujova okufakwayo noma kwe-intravenous. I-Dextrose iyithuluzi elinamandla kakhudlwana - kulandela inqubo, empeleni ilawulwa uchwepheshe wezokwelapha onolwazi ngokusetha imijovo.
Isifo sikashukela yi-pathology engamahlalakhona evame ukukhipha izingqinamba ezivela ezithweni nasezinhlelweni ezahlukahlukene. Ukwelashwa kwezinkinga, kuyadingeka ukwelashwa okwengeziwe. Kulokhu, kubalulekile ukwazi ukuthi yimiphi imiphumela ezinye izidakamizwa ezihambisana ne-Protafan yokulungiselela i-insulin. Udokotela kumele aguqule umthamo.
Umphumela wokuqiniswa kwe- "Protafan":
yonke imithi ene-ethanol iyiqembu elikhulu, ngakho-ke ngaphambi kokusebenzisa noma imuphi umuthi kungcono ukubheka ukwakheka,
Ama-inhibitors e-ACE - iqembu lezidakamizwa ezisetshenziswa ngenkuthalo ekwelapheni umfutho wegazi ophakeme,
Ama-inhibitors we-MAO - izidakamizwa ezibulala izinhlungu ezinqunyelwe kwezengqondo,
ama-beta-blockers angakhethi - asetshenziswa ekwelapheni izifo zenhliziyo,
amaphilisi omlomo ekwelapheni i-hyperglycemia,
izidakamizwa ze-tetracycline antibacterial, sulfonamides,
i-carbonic anhydrase inhibitors - leli qembu lifaka inani elikhulu lezidakamizwa ezinomphumela we-diuretic,
Clofibrate - kunciphisa ukugcwala kwe-cholesterol ephansi egazini,
ketoconazole - umuthi obhekene nama-mycoses,
fenfluramine - umuthi wokulawula inkanuko,
bromocriptine - isidakamizwa esisetshenziswa ku-gynecology,
cyclophosphamide - isidakamizwa se-antitumor,
mebendazole - umuthi wokwelashwa kwe-helminth,
Ezigulini ezidinga ukwelashwa ngale mishanguzo, kuyadingeka ukunciphisa isilinganiso sokulungiswa kwe-insulin ngesikhathi sokuphatha kwabo.
Izindlela zokwelapha ezilandelayo zimbi kakhulu umphumela weProtafan:
blockers of slowly calcium channels, ngenye indlela i-calcium antagonists - asetshenziswa ekwelapheni umfutho wegazi ophakeme,
ama-hormone e-thyroid - asetshenziswa njengokwelashwa okuthatha indawo,
izindlela zokuvimbela ukuphathwa ngomlomo,
umuthi we-antihypertensive "Clonidine",
Umuthi olwa nokuwa isithuthwane - "Phenytoin",
ukukhula kwehomoni somatotropin,
I-diazoxide enomphumela we-hypotensive ne-diuretic,
i-dinazole - isetshenziselwa ukwelapha i-endometriosis kanye nezinye izimila zesimo esingajwayelekile sezitho zangasese sowesifazane.
Ezinye izinto ezisetshenziswayo ezidakamizweni nasezidakamizweni ngokwazo kungathinta ukugcwala kwe-glucose ngezindlela ezihlukile - okungukuthi kunganda noma kunciphe. Lezi zinto zifaka utshwala, i-reserpine, ama-salicylates.
Kunomgomo oyisisekelo wokusetshenziswa kwazo zonke izidakamizwa ezine-insulin - ukwelashwa okuyinkimbinkimbi kuphela ngezindlela ezamukelekayo, ukuhambisana kwazo okuqinisekiswe ngokusemthethweni yizifundo ezikhethekile zobudokotela.
Cishe izifanekiso eziphelele zeProtafan zethulwe etafuleni. Umehluko wabo usezindleko nezomenzi kuphela.
Igama lomuthi Umkhiqizi Intengo
"Humulin NPH" E-USA Cishe ama-ruble angama-600.
I-Insuman Bazal EFrance Cishe i-1300 rub.
"Biosulin N" IRussia Cishe ama-ruble angama-500.
I-Rinsulin NPH IRussia Cishe ama-ruble angama-450.
Ngokombono wesayensi yezokwelapha, lapho kuguqulwa i- "Protafan" esikhundleni saleyo nto esebenzayo, lokhu akubhekwa njengokuguqukela kolunye uhlobo lwe-insulin. Ngisho noma umuthi awubonisi awubonisi igama lokuhweba lomuthi, kepha isakhi salo esisebenzayo. Kepha, eqinisweni, ukumiselela okunjalo kungadala imiphumela emibi, ukulawulwa kwe-glycemic okubi kakhulu, kudinga ushintsho lomthamo futhi kubangele i-hypersensitivity. Lapho isilinganiso se-hemoglobin se-glycated sejwayelekile, futhi ukuhlaselwa kwe-hypoglycemia kungenzeki noma ukuthuthuka kakhulu, akunconywa ukuba uyeke ukwelashwa ngeProdafan.
I- "Protafan" ilungiselelo elinamandla le-insulin, elinomthamo udinga ukuqaphela ukuthi ungaqali ukuhlasela i-hypoglycemia. Ngayalelwa ukuba kudlule iminyaka embalwa edlule, futhi ngemuva kokuthola umthamo wokuqala nje ukuhlaselwa okunjalo kwenzeka. Ngemuva kokushintsha umthamo, konke bekuhamba kahle, ushukela uvamile.
Ngisebenzisa i-Protafan ngokuhlanganiswa ne-Actrapid. Ngigculisekile ngomphumela, ushukela ube yinto evamile isikhathi eside kunalokho, bekungekho ukwehluleka.
Umuthi kumele ugcinwe ungatholakali wengane. Kumakhemikhali e-Protafan ungayithenga ngokuqinile ngokuya ngommiselo. Izindleko ezijwayelekile zama-ruble angama-400. ngebhodlela elilodwa no-800 - 1000 wamabhokisi.
Umuthi usetshenziswa ngenkuthalo ezinhlelweni ezahlukahlukene zokwelapha zesifo sikashukela i-mellitus, okuyiqiniso, eliqinisekisa ukusebenza kwawo. Umphumela onenzuzo enhlalakahleni yesifo sikashukela uyaphawulwa. Odokotela neziguli ezimweni eziningi bakhuluma kahle ngeProtafan. Ikuvumela ukuthi ulondoloze umkhuba ushukela osegazini futhi uvikele izinkinga zesifo, inqobo nje uma ukhetha indlela efanele yokwelashwa, umthamo.